Imwe yemishonga inodzikisa hukasha hweHIV/AIDS kana kuti maAntiretroviral (ARV).
Muongororo yakaitwa neStudio7 mumaguta eFrancistown neGaborone, ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe, inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vemadhorobha aya.
Meya weguta reGaborone, VaKagiso Thutwe, vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika, zviri kuda rubatsiro urwu.
Izvi zvinotsigirwa nameya weFrancistown, Amai Sylvia Muzila, avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika, kusanganisira Zimbabwe, vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapihwewo mishonga iyi pachena.
Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone, VaMoses Chamunorwa, vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuviro yekuwana mishonga, sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori inonzi iri kuitika pakupihwa kwevanhu mishonga yema Antiretroviral Drugs, ARVs.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Muzvare Celestine Mupandawana, vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yema ARVs.
Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV/AIDS, chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopihwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pama ARVs kare.
Mumwe mugari, Muzvare Venencia Musavengana, vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano, VaWiston Muzangwa, vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore moyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha.
Bazi re National AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari pamishonga yema ARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana, vari vanhu vekuZimbabwe.
Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupihwa mishonga yemaARVs pachena.
Pasi pemitemo yenyika, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo, vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana, uye vanhu vari mumajeri.